ဖူးနုသစ်: လူပျိုသိုးကြီးများ သိဖို့ကောင်မလေးတို့အကြောင်း
ဒီရက်ပိုင်း ငံပြာရည်ပုံးထဲ ဆားခတ်ထားတဲ့ လေးလေးနက်နက် ပို့စ်တွေ များသွားပြီ။ စိတ်ရှုပ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပေါက်တတ်ကရ ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။
အခုတလော အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူပျိုကြီးများကို ဘာလို့ လူပျိုကြီး ဖြစ်နေရသလဲလို့ တစေ့တစောင်း အကဲခတ်ကြည့်ပါတယ်။ :D သူတို့တွေမှာ တူညီတဲ့ အချက် အတော်များများကို သွားတွေ့ပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ မိန်းကလေးတွေ အကြောင်းကို မသိကြပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေ လိုပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခု အချိန်အထိ မစွံနိုင်ကြသေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် သိထားသလောက် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဘလော့ခ် ပေါ်ကနေ ပြောပြပါမယ်။ မှားသွားလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ပြင်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စက ယူနီကုတ်ထက် ပိုပြီး ဆွေးနွေး ပေးမယ့်သူ ပေါပါတယ်။
ခေတ်ကြီးကတော့ အတော်ကို တိုးတက်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို ကောင်မလေးကို တကူးတက လမ်းမှာစောင့်ပြီး ရည်းစားစကားလိုက်ပြောရတာတို့၊ ရည်းစားစာ လိုက်ပေးရတာတို့ လုပ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ Gtalk တွေ၊ E-mail တွေ၊ SMS (Text) နည်းပညာတွေက ဒီနေရာမှာ အသုံးချလို့ ရပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာကို အပြည့်အဝ အသုံးချတတ် ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ပွားမယ် စဉ်းစားရင် စစချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ Gtalk မှာ ခဏခဏ လာ Chat တယ်၊ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ဖုန်းဆက်တယ် ဆိုကတည်းက လာအီတယ် ဆိုတာကိုတော့ မိန်းကလေးတိုင်း အနည်းနဲ့ အများ သိပါတယ်။ စစချင်း သိပ်ပြီး ပေါ်တင်ကြီး မဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ ကိုယ်မဟုတ် သလို အသာလေး ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေပါ။ နည်းနည်း အခြေအနေ ကောင်းတယ် ထင်ရင် စကား ပြောရင်း တစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ သွေးတိုးစမ်းကြည့်ပါ။ အခြေအနေကောင်းရင် ဆက်လှုပ်ရှားပါ။ အခြေ အနေ မကောင်းဘူး ထင်ရင် ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခဏပြန်ငြိမ်နေပါ။ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း မှန်းရခက်ပါတယ်။ သူတို့က ကြိုက်ရဲ့သားနဲ့လည်း ပဲများပြီး အိုက်တင်တွေလည်း လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ တစ်ခါလောက် ငြင်းခံရရုံနဲ့ လက်မလျော့ပါနဲ့။ အခွင့်သာရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လှုပ်ရှားပါ။
စကားပြောတဲ့ နေရာမှာ သတိထားပြီး ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ ကောင်မလေးများက ဆရာလိုလို သဘာလိုလို လုပ်တဲ့သူများ၊ အလွန်ကြွားတဲ့ သူများ၊ နေရာတကာ ဘုရားဒါယိကာ ဂိုက်ဖမ်းနေတဲ့ သူများကို သဘောမကျတာ များပါတယ်။ စကားပြောရင် တော့ပစ်တစ်ခုတည်းမှာ အကြာကြီး တမေ့တမော ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်မျိုး ကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ အဲဒီအကျင့်တွေ ရှိနေရင် Chat တဲ့ အချိန်၊ ဖုန်းပြောတဲ့အချိန် သတိထားပြီး ဖျောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ အခွင့်အရေး ၊လွတ်လပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချုပ်ချယ်တဲ့ စကားမျိုး မပြောမိဖို့ သတိထားပါ။ ဒါတွေက နောက်မှ ညှိယူလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို သူက စမပြောဘဲ စပ်စပ်စုစု ထဲထဲဝင်ဝင် လိုက်မမေးပါနဲ့။ သူပြောရင်တော့ အလိုက်သင့် ဖော်လို လိုက်ပေးပါ။ အိုဘားမား အကြောင်း ကွန်ပြူတာ အကြောင်း စတာတွေဟာ ယောက်ျားလေးများ အချင်းချင်း ပြောရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် မိန်းကလေး တွေနဲ့ ပြောဖို့ သင့်လျော်တဲ့ တော့ပစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ပွားတဲ့အချိန် တောင်စဉ်ရေမရ အရည်မရ အဖတ်မရ ကိစ္စမျိုးကို ဦးစားပေးပြီး ပြောပါ။
ကိုယ်က စဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ နောက်ဆို သူတို့ကချည်းပဲ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူ့ကို မကျေနပ်တာတွေ ဘယ်မှာ ဘယ်လို အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ မကြားချင်မှ အဆုံး ကြားရပါလိမ့်မယ်။ နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ အကြံပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့ အတွက် သူတို့ ပေါက်ကွဲတာကို နားထောင်ပေးမယ့်သူပဲ လိုပါတယ်။ “ရုံးမှာ အဆင်မပြေရင် နောက်အလုပ် ပြောင်းလုပ်ပေါ့ကွာ။” “သူနဲ့ အဆင်မပြေဘူးလား။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးများ ပေါင်းမနေနဲ့။” ဆိုတဲ့ အကြံပေးတာမျိုးတွေကို ရှောင်ပါ။ မကျေနပ်ပေမယ့်လည်း အဲလိုတွေ ပြောရင် ပြသနာက ကိုယ့်ဘက် လှည့်လာနိုင်ပါတယ်။ နားထောင် ပေးရုံနဲ့ “ဟုတ်တာပေါ့။ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး။” ဆိုတာလောက်နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်း ခယနေဖို့ မလိုပါဘူး။ အမြဲတမ်း အပေါ်စီးကနေ ပြောလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေက တသမတ်တည်း သွားနေတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကိုလည်း သဘောမကျပါဘူး။ ရသစုံတာကို ပိုသဘော ကျပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရန်ဖြစ်တာ စိတ်ကောက်တာ တွေတော့ ရှိမှာပါပဲ။ စိတ်ကောက်တာ သူတို့ အကျင့်ပါ။ အဲဒါကြောင့် “စိတ်မကောက်နဲ့။ မချော့တတ်ဘူး။” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ရည်းစားဖြစ်ပြီးရင် တောင်မှ ယောင်လို့မှ မပြောမိပါစေနဲ့။ မိန်းကလေးများ အလွန် အချော့ကြိုက်ပါတယ်။ ချော့တတ်အောင်တော့ ကျင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သတိတရ ဂရုစိုက်ဖို့ပါ။ မိန်းကလေးများ ဂရုစိုက်တာကို အင်မတန် သဘောကျပါတယ်။ “မိုးမိသွားလား။ ဖျားဦးမယ်။” “နေ့လည်စာ မစားရ သေးဘူးလား။ ဗိုက်အောင့်နေဦးမယ်။” “ဒီနေ့ အလုပ်တွေ အရမ်းပင်ပန်းတယ်လား။ နားပါဦးလား။” ဆိုတာမျိုးကို ပါးစပ်က အော်တိုမက်တစ် ထွက်အောင် လုပ်ထားပါ။ အပိုတွေ မပြောနဲ့ ပြောပေမယ့်လည်း သူတို့ ကိုယ်တိုင်က အဲဒီ အပိုတွေကိုပဲ သဘောကျပါတယ်။
အလွန် လက်တွေ့ကျတယ် ဆိုတဲ့ မိန်းမမျိုး ရှိပေမယ့် အလွန်ရှားပါတယ်။ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းက လက်တွေ့ကျတယ် ပြောရင်တောင် အင်မတန် နုပါတယ်။ ရိုမန်းတစ် ဖြစ်တာကို အလွန်သဘောကျပါတယ်။ ရိုမန်းတစ် ဖြစ်အောင် လုပ်ပြရင် အလုပ်အပိုတွေ လျှောက်လုပ်နေတယ် ပါးစပ်က ပြောပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ ကြိတ်ပြီး ကြည်နူးနေတတ် ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြရရင် ပန်းစည်းပေးတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ ရိုမန်းတစ် ဖြစ်တဲ့ ပန်းစည်းကလေး တစ်စည်းလောက်ရရင် သဘောမကျတဲ့ မိန်းကလေး မတွေ့ဖူးသေး ပါဘူး။ မိန်းကလေးကို လက်ဆောင်ပေးရင် ပစ္စည်းကို သတိထားရွေးပါ။ အသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းမျိုးထက် အမှတ်တရ ဖြစ်မယ့် ပစ္စည်းမျိုး ဟတ်ထိမယ့် ပစ္စည်းမျိုးကို ဦးစားပေးပြီး ရွေးပါ။ ပိုက်ဆံ ကုန်ချင် ကုန်ပါစေ။
စေ့စေ့ကုပ်ကုပ် တွက်တတ် ချက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကလည်း မကောင်းပါဘူး။ တွက်လွန်းလို့ ရည်းစား မရတဲ့သူများလည်း ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးများ သူတို့ကိုယ်တိုင်သာ ခွေျတာရင် ခွေျတာမယ် ကပ်စေးနည်း လွန်းတဲ့ ယောက်ျားကိုလည်း သဘောမကျပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်မွေး ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ လောက် ကုန်လို့ ကလေး ၂ ယောက် အမေယူရင် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ လောက် မြတ်တယ် လို့လည်း မတွက်ပါနဲ့။ ပုံမှန်လေးပဲ ကောင်းပါတယ်။ သိပ်တွက်လွန်းတာ မသင့်လျော်ပါဘူး။
ရည်းစားထားတာ တစ်ယောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်ထက် ပိုရင်တော့ ခေါင်းမွေးပြောင်နိုင် ပါတယ်။ အခုတော့ တစ်ယောက်တောင်မှ မရနိုင်သေးတဲ့ သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မခင်ဦးမေ ရဲ့ Nature of Women စီးရီး နဲ့ Tuition Intensive ကိုလည်း မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted by ZT at 2:10 PM
ko zt yay,
i m using 95percent of these thing in ur post. BUT STILL NO GRILFRIEND ! HOW? :P
ထပ်စဉ်းစားဦးမယ်။ ဘာကျန်သေးလဲလို့။ :D
I learnt from ur post. I should correct something to getagf. thanks.
အင်မတန် မှတ်သားဖွယ်ရာတွေပဲဗျ ကျွန်တော် ပရင့်ထုတ်ပြီး ထားဦးမှတယ်ဗျ။ အပိုအလုပ်တွေ လုပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ရဦးမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မလုပ်တတ်ဘူး အဟိ။
ဖတ်ပြီးချင်းချင်းတော်တော်သဘောကျသွားတယ် အိမ်ရောက်မှနောက်တစ်ခေါက်လာဖတ်ပြီး မန့်တော့မယ် ခုရုံးမှာမို့ :)
ဝေ.... တို့အစ်ကိုကြီး က ဒါမျိုးတွေ ပဲရေးတတ်တာပဲလား... ဟုတ်တယ် ရေခဲတုန်းကြိးတွေဆို လူပျိုကြိး ဖြစ်ဖို့ များတယ်..။ ကိုZT ရေးထားတာတွေတော်တော်လေး တော့ ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပါ... း)
intensive courses တွေအကုန်လိုက်တက်ပြီး.. playboy တို့ playgirl တို့ ဖြစ်လာရင်တော့ ဒီလိုပို့စ်တွေစရေးတဲ့ မခင်ဦးမေတို့ ကိုဇက်တီတို့ တရားခံပဲဗျ...။
online tution ဖွင့်တော့မလို့လား
တခါတလေလဲ မထင်မှတ်တဲ့ လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့လဲ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူပါ။
(ကျုပ်တုန်းကတော့ ရည်းစားမဖြစ်ခင် သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ဘုရားရှိခိုး အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုတီးတစ်ကုံး လက်ဆောင်ပေးဖူးသဗျ။ သူရို့အဆောင်မှာ အဲဒီအကြောင်းကို ပြောမဆုံးဖြစ်နေဖူးသတဲ့။ အခုအထိ စကားကြုံရင် မဒမ်က ပြန်ပြန်ပြောသဗျ။ အဟိ။ သူများတော့ မသိ။)
ဆရာလုပ်တာ မကြိုက်တာလည်း ဟုတ်တယ်
ဒါက ရည်းစားရဖို့လောက်ပဲ အသုံးဝင်မယ်။ လူပျိုကြီးဘဝကျွတ်ဖို့ဆိုရင် advance technique တွေလိုဦးမယ်။ ဒီလောက်နဲ့ပွဲမပြီးသေးဘူး း)
မှန်တယ်။ ပန်းလေး အရုပ်လေး သီချင်းလက်ဆောင်တောင်းပေး ရင်သဘောကျမှကျ။
နောက်ပြီး မိန်းကလေးလည်း အိမ်ထဲမှာ ကုပ်နေရင် ရည်းစားမရတာ ရေးပါဦး။ း(
ကိုဒီဘီရဲ့ပုတီးက ချိပ်ပုတီးဖြစ်သွားလား စိပ်ပုတီးဖြစ်သွားလား သိချင်ပါတယ်...
ဘယ်ဟာကပိုပြီး လူပျိုကြီးတွေအတွက်် ထိရောက်မလဲ
လူပျိုကြီးတွေအတွက်ရေးထားတာ အတော်ပြည့်စုံတာပဲ.. ဒီဆရာတော့ နာမည်ကြီးဦးမယ်.. ဖတ်ရင်း ရီရတယ်.. ကြုံလို့ ပြောပြဦးမယ်.. အမတို့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တုန်းက အမသူငယ်ချင်းကို အသက် ၃၆ ဘွဲ့ရလူပျိုကြီးတစ်ယောက်က ရည်းစားစာ လိုက်ပေးတယ်.. သူငယ်ချင်းနဲ့ အသက် အတော်လေးကွာတဲ့အပြင် အဲဒီလူကြီးပုံက မိန်းကလေးကြိုက်တတ်တဲ့ ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူး.. ရည်းစားစာ လိုက်ပေးတော့ မယူဘူးလို့ ပြောတာကို အတင်းပေးပြီး မယူရင် မပြန်ဘူး ဘာညာလုပ်လို့ အမတို့မှာ ဘေးက ရီချင်တာ မနည်းထိန်းနေရတယ်.. ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်..သူ့မှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိတယ် သူ့စီးပွားရေးတွေက ဘာတွေ စသဖြင့် လျှောက်ပြောတော့တာပဲ.. နဂိုကမှ သူငယ်ချင်းက မကြိုက်တဲ့အပြင် ငွေရေးကြေးရေး တွေပါပြောတော့ သူ့ကို ငြင်းလိုက်တာ တူးတူးခါးခါးပဲ.. :) အဲဒီလူပျိုကြီးက နောက်ဆုံးတော့တခြား သူနဲ့ရွယ်တူ အမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ယူသွားတယ်.. ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး သွားသတိရမိလို့ ရေးလိုက်တာပါ..:D
(ကလေးတစ်ယောက်မွေး ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ လောက် ကုန်လို့ ကလေး ၂ ယောက် အမေယူရင် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ လောက် မြတ်တယ် လို့လည်း မတွက်ပါနဲ့။)
ဒါနဲ့ ဦးချစ်မောင်လိုလူမျိုးကျ ဒေါ်မမလေးလို မိန်းမမျိုးနဲ့ ရတယ်နော်။
pha yar ..pha yar... thi hla gyi lar hal....@_@
r အသေးနဲ့ rita က ရှိသေးတာလားဟင်။ ရှုပ်ကုန်တော့မယ်
လေးတာ မပြောနဲ့ သွေးတောင် တိုးနေပြီ..ဒီလို ရေလေးဘာလေး ရောမှပေါ.. း))
ရိုမန်းတစ် ဖြစ်တဲ့ ပန်းစည်းကလေး တစ်စည်းလောက်ရရင် သဘောမကျတဲ့ မိန်းကလေး မတွေ့ဖူးသေး ပါဘူး။
ကိုကိုချစ် ကိုများ ကိုဇက်တီ နည်းပေး လမ်းပြ လုပ်သွားသေးလား...
အရင် က ပန်းစည်း သာ ခဏခဏ မပေးရင်တော့ ကြိုက်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး ဟိဟိ.. း))
အတော်ဘဲ သူငယ်ချင်း လူပျိုကြီးတွေကို ဒါဖတ်ခိုင်းရမယ် .. :))
u also လူပျိုကြီ, Am i right to say that :D
I think..it's not really...
We need to know what we are aiming for...
Whatever you do , U needapurpose..right..?
It's depend on purpose, Heee....
Nowdays, Most single guys are too smart...
I think your opinion is tooo Outdated...
most of Old singly guys exactly knew what they want and they' r aiming for it...Most girls don't know...and they 'r the target..?
Nowadays are tooooo easy to get easy girls...in spore...
Single guys are the one target from alot of girls / women bcoz most girls / women want to get settle and marry...
so all single guy need to run away..
don't try to use gtalk..and so on...
အဟမ်း ဘယ်အသက်အရွယ်နှင့် ဘယ်အသက်အရွယ်ကို ရည်ရွယ်သလဲ ထည့်ရေးပေးစေလိုကြောင်း
ဇော်ဂျီ နဲ့ ယူနီကုတ် ပို့စ်တုန်းက ပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးကြတာမို့ အသံတိတ် လိုက်မှတ်သွားရတယ်။
ဒီပို့စ်ကျတော့လဲ ပညာရှင် ဆရာကြီးက ပို့ချတာမို့ မမ kom class ကနေ ပြေးလာ ပညာယူရတယ်။
ဒါနဲ့ ZT အိမ်ထောင်ကျပလား။ :)
အဲဒီဟာတွေ အကုန်လုံး လိုက်နာနိုင်ပြီး မိန်းမရပြီပဲထားပါတော့။ ဘယ်နှနှစ် ဆက်လက် အဲလိုကြိုးစားနိုင်မလဲ။ မိန်းကလေးက ယူပြီး ဆယ်နှစ်ကြာလဲ ရိုမန်းတစ်ချင် တစ်နေတတ်တာလဲ ထဲ့တွက်ဖို့ လိုဦးမယ်နော်။ :D
Gipsy Mon said...
Good article Ko ZT..
BUT main problem for them is there is no social network to start with.. :-) I mean how to get the Gtalk, Phone no etc. at the first step..
I guess they know how to react after getting contact unless thinking too much for future!
ဟီးဟီး အားရပါးရဖတ်ပြီး ရယ်သွားတယ်။ ရည်းစားလိုချင်နေတဲ့ အကိုကြီးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖတ်ခိုင်းရမယ်
အဲဒါတွေကို နားမလည်လို့ ၁၀ နှစ်လောက် ရွာလည်ပြီးသကာလ အခု နားလည်တတ်ကျွမ်းတာ ၃ နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။
နားလည်တတ်ကျွမ်းလို့ စာထက် အက္ခရာတင်ချင်သော်လည်း ... ဒီလို ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်း မရေးတတ်ချေပါ။
အခုတော့ အရမ်းကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုပါအိ။
သြော်.. zt လေးတောင် အရွယ်ယောက်လို ABCD
သြော်.. အချိန်တွေ ချ စားသွားပြီ ထင်ပါ့်ကွယ်...
အားပါးပါး..........သြောချသွားပါရဲ့ တတ်လှ သိလှ ကျမ်းကြေလှချီလား။ ဆရာကြီလို့ခေါ်သွားပါမယ်နော်။ သင်တန်းလာတတ်တဲ့လူတွေများနေပြီ ကိုဇက်တီရေ......
ကလေးတစ်ယောက်မွေး ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ လောက် ကုန်လို့ ကလေး ၂ ယောက် အမေယူရင် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ လောက် မြတ်တယ် လို့လည်း မတွက်ပါနဲ့။ ပုံမှန်လေးပဲ ကောင်းပါတယ်။ သိပ်တွက်လွန်းတာ မသင့်လျော်ပါဘူး။
လူပျိုကြီးတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ ...
ဒါပေမဲ့ အပျိုကြီးတွေအတွက်လည်း နည်းလမ်းလေးရှာပေးလိုက်အုံးလေ ..